पूर्व–पश्चिम राजमार्ग:टालो हाल्ने काममै आलटाल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / पूर्व–पश्चिम राजमार्ग:टालो हाल्ने काममै आलटाल
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग:टालो हाल्ने काममै आलटाल
Posted by: युगबोध in प्रमुख समाचार, स्लाइड 14 days ago	0 38 Views
देउखुरी, दाङ मसिनाकी भुमा भट्टराई बुधवार चन्द्रौटाबाट लमहीसम्मको लागि बस चढ्नुभयो। बसमा राम्रैस“ग आइरहनुभएकी भट्टराई सुन्डबरी आइपुग्दा सिटबाटै खस्नेगरी बसले झ्या“क्न पुग्यो र गल्लीमा बजारिनुभयो। ढाडमा नराम्रोस“ग चोट लाग्यो। बसबाट ओर्लनै मुस्किल प¥यो। ‘खाल्टाखुल्टी धेरै छन्। बेसरी झ्या“केर यस्तो भयो। यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौं र ? सरकारलाई राम्रो बाटो बनाउन भन्नुस्’– ना ६ ख ५३६४ नम्बरका बसका कर्मचारीले भने– ‘बाटो राम्रो भएको भए केही ह“ुदैनथ्यो। बाटो खराब भएर बसभित्रै मानिस घाइते हुने अवस्था आयो।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सिसहनियादेखि लमहीसम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा टालो हाल्ने कामसमेत अलपत्र परेको छ। एक–दुई
दिन स्थानीयको आ“खामा छारो हाल्ने जसरी काम गरिए पनि अहिले टालो हाल्ने काम पनि अलपत्र परेको हो। राजमार्ग पुरै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर खाडल परेको ठाउ“मा टालो हाल्ने काम समेत आलटाल हु“दा स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।
‘कतिपटक भन्ने, कतिपटक डेलिगेसन जाने ? सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारलाई काम लगाउन सक्दैन’– लमही नगरपालिका वडा नं. १ नर्ती निवासी घनश्याम खनालले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयसम्म कुरा पुयाउ“दा समेत काम भएन।’ चारैतिरबाट दबाब आएपछि केही दिन खाडलमा टालो हाल्ने काम गरिए पनि त्यो काम अहिले अधुरै छ। ‘टालो हालिएको ठाउ“नजिकै अर्काे खाडल पर्न थालिसकेको छ’– खनालले भन्नुभयो– ‘टालो हाल्दै उप्किदै गर्छ। बिजौरी देखि भालुवाङसम्म जस्तै पुरानो पिच माथि नया“ पिच थप्ने काम गर्न जरुरी छ। यसो गरियो भने, राजमार्ग क्षत विक्षत हुनबाट जोगिन्छ।’
राजमार्गको अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रदा समेत सडक डिभिजन कार्यालयले ध्यान दिएको छैन। गत वर्ष ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले अझै टालो हाल्ने काम सम्पन्न गरेको छैन्। जाडो महिनामा वनगाउ“ क्षेत्रमा टालो हाल्दा हाल्दै रोकिएको काम कालाकाटे क्षेत्रमा शुरु भयो। त्यसपछि त्यो कामले गति लिन पाएन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको कारण टालो हाल्ने काम अलपत्र परेको स्रोतले बताएको छ। शान्ति निर्माण सेवा एण्ड ट्रेडर्सले राजमार्गमा बढेका खाडलमा टालो हाल्न ८० लाखको ठेक्का पाएको हो। तर टालो हाल्ने काममा आलटाल भइरहेको छ। काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरे पनि कारवाही भने गर्न सकेको छैन।
Previous: राप्ती बबईमा अन्तक्र्रिया
Next: प्रदेशतहमै विषादी परीक्षण प्रयोगशाला